के हो बच्चाका लागि सन्तुलित आहार ? - ज्ञानविज्ञान
Topics #बच्चा #सन्तुलित
Up Next आँखा फरफराउँनु शुभ अशुभ मात्रै होइन, यस्तो स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ, जानी राखौँ
बिरामी बेहोश बनाउने, के हो एनेस्थेसिया ?
एनेस्थेसियाको प्रकार शरीरको कुनै भाग लठ्याउने वा पुरै शरीर बेहोश बनाउने आधारमा तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । आज १६…
ग्यास्ट्रिक निको पार्ने यी हुन् घरेलु ओखती
आजभोलि धेरै ग्यास्ट्रिकको समस्या लिएर अस्पताल जाने गर्छन् । ग्यास्ट्रिक नभएका मानिस भेट्न मुस्किल पर्छ । यो समस्या विभिन्न कारणले…